हवाई भाडा घट्यो, अब नयाँ भाडा कति ? - Everest Dainik - News from Nepal
हवाई भाडा घट्यो, अब नयाँ भाडा कति ?
काठमाडौं, पुष २७ । आन्तरिक वायुसेवाले हवाई भाडा घटाएको छ । नेपाल आयल निगमले आन्तरिक वायुसेवाले प्रयोग गर्ने हवाई इन्धनको मूल्य घटाएपछि हवाई भाडा पनि घटेको हो ।
निगमले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी प्रति लिटर १० रुपैयाँले इन्धनको मूल्य घटाएपछि आन्तरिक उडानका वायुसेवाले आइतबारबाट लागू हुने गरी हवाई भाडा घटाएका हुन्।
याे पनि पढ्नुस सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि, नयाँ भाडा कति?
आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले कम्तिमा ९० रुपैयाँदेखि बढीमा ४४० रुपैयाँसम्मले हवाई भाडा घटाएको वायुसेवा सञ्चालक संघका सदस्य तथा सिम्रिक एयरका बजार निर्देशक प्रज्वज थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार इन्धनको मूल्य घटेपछि हवाई भाडा पनि घटाइएको हो।
संघका अनुसार सबैभन्दा कम काठमाडौंबाट सिमराको लागि घटेको छ। सिमरामा ९० रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी काठमाडौंबाट धनगढीको लागि घटेको छ। काठमाडौं धनगढीको भाडा ४४० रुपैयाँले घटेको छ। आन्तरिक उडानमा काठमाडौं सिमरा सबैभन्दा छोटो दूरीको (२० मिनेट) र काठमाडौं धनगढी सबैभन्दा टाढा (सवा घण्टा) को गन्तव्य मानिन्छ।
समायोजनपछिको हवाई भाडा